Iingxelo eziphezulu zeDorothy
U-Dorothy Height (1912 - 2010)
Ubungakanani bukaDorothy , obalulekileyo kwinkokheli yaseMelika yasekuhlaleni amalungelo, asebenze iminyaka emininzi kwiYWCA, kwaye uqhubela phambili kwiBhunga leSizwe le-Women's Negro iminyaka engaphezu kwama-50.
Ukhethiweyo lweDorothy Height Quotations
• Ukuba ukhathazeke ngoba ngubani oza kuthenga iitaliti, awufumani umsebenzi owenziweyo.
• Ubukhulu abukelwanga yintoni indoda okanye ibhinqa efezekileyo, kodwa ngokuchasene, unqobile ukufikelela kwiinjongo zakhe.
• Ndiphefumulelwe nguMary McLeod uBethune, kungekuphela nje ukuba ndikhathalele kodwa ndisebenzise nayiphi na italente endimele ndiyenze inkonzo ethile kuluntu.
• Njengoko ndicinga ngethemba kunye nemingeni ejongene nabasetyhini ekhulwini lama-21, ndikhunjuzwa ngemigudu eqhubekayo yabafazi base-Afrika nabama-America abahlanganisana njengo-SISTERS ngo-1935 ngokuphendula kuMnumzane uBethune. Kwakuyimpumelelo yokujongana ngobuchule kunye nelokuba abafazi abamnyama babemi ngaphandle kweMerika, ithuba kunye namandla.
• Ndifuna ukukhunjulwa njengomntu owazisebenzisayo kunye nantoni na ayenokuyenza ukusebenzela ubulungisa nenkululeko .... Ndifuna ukukhunjulwa njengomntu owazama.
• Umfazi weNegro unoluhlobo olufanayo lweengxaki njengabanye abafazi, kodwa akakwazi ukuthatha izinto ezifanayo.
• Njengokuba besetyhini abaninzi bangena ebomini babantu, ndiyabona ukuphuhlisa uluntu olungakumbi. Ukukhula nokuphuhliswa kwabantwana akusayi kuxhomekeka kuphela kwiimeko zabazali babo.
Kwakhona, uluntu njengentsapho eyongezelelweyo iya kuvuselela nokunyamekela. Nangona abantwana bengenakuvota, iimfuno zabo ziya kufakwa kwi-ajenda yezopolitiko. Kuba ngokwenene lixesha elizayo.
• Ngo-1989, malunga nokusebenzisa igama elithi "abamnyama" okanye "i-Afrika-yaseMerika": Njengoko siqhubela phambili ukuya kwikhulu lama-21 kwaye sijonge indlela edibeneyo yokuchonga ngokupheleleyo ifa lethu, lethu langoku kunye nekamva lethu, I-Amerika ayiyona into yokubeka phantsi omnye ukuba athathe enye.
Kukwazisa ukuba besihlala siAfrika kunye namaMerika, kodwa ngoku siza kujongana nathi kuloo migaqo size senze umzamo onobumbano ukuze sibone abazalwana kunye nodadewethu baseAfrika kunye nelifa lethu. I-Afrika-yaseMelika inokukwazi ukusinceda ukuba sidibane. Kodwa ngaphandle kokuba sichaze intsingiselo epheleleyo, eli gama aliyi kwenza umehluko. Iba yileyibhile kuphela.
Xa saqala ukusebenzisa igama elithi 'Black,' kwakungaphezulu kombala. Kwafika ngelixa abantu bethu abaselula behamba kunye ne-sit-ins benza isikhalazo esithi 'Amandla Amnyama.' Yayimela amava amnyama eMelika naseMnyama amava abo behlabathi lonke abacinezelekileyo. Siphila kwindawo eyahlukileyo ngoku. Umzabalazo uyaqhubeka, kodwa ucocekile. Ngoko ke, sidinga, kwiindlela ezinamandla kakhulu, esinokuzenza, ukubonisa ubunye bethu njengabantu kwaye kungekhona nje ngabantu abemibala.
• Kwakungekho lula kulabo baye baba ziimpawu zomzabalazo wokulingana ukuze babone abantwana bethu bephakamisa izibonda zabo ngokuchasene nxamnye nabo bonke esililwela.
• Akukho mntu uya kukwenzela oko kufuneka uyenzele wena. Asikwazi ukukwazi ukuhlukana.
• Kufuneka sibone ukuba sonke sisekhokheni enye.
• Kodwa sonke sisekhokheni enye ngoku, kwaye sifanele sifunde ukusebenza kunye.
• Asiyiyo ingxaki yabantu; singabantu abanengxaki. Sinamandla amakhulu; siye saphila ngenxa yentsapho.
• Kufuneka siphucule ubomi, kungekhona kuphela kwabo banezakhono ezininzi kunye nabo baziyo ukusetyenziswa kwenkqubo. Kodwa kunye nabo bahlala benokuningi kunike kodwa bangalutholi ithuba.
• Ngaphandle kwenkonzo yomphakathi, asiyi kuba nobunzima obunobomi. Kubalulekile kumntu osebenza kunye nommkeli. Yindlela esinokukhula ngayo kwaye sikhule.
• Sifanele sisebenze ukugcina abantwana bethu kwaye senze ngenhlonipho epheleleyo ngento yokuba xa singenjalo, akukho mntu uya kwenza.
• Akukho ukuphikisana phakathi kokuthotyelwa komthetho nokuhlonipha amalungelo oluntu kunye noluntu. UDkt. King akazange asishukumisele ukuba sithuthelele amalungelo ethu okubambisana nawo ukuba athathwe kwiintlobo zeefashoni.
• Intsapho yaseNtsundu yexesha elizayo iya kukhuthaza inkululeko yethu, ithuthukise ukuzithemba kwethu, kwaye siyijonge iingcinga kunye neenjongo zethu.
• Ndiyakholwa ukuba sinamandla ezandleni zethu kwakhona ukuba sizenzele kuphela ikhefu lethu lizwe-kwikamva elisekelwe ekuphuhliseni i-ajenda ejongene nemingeni ekuphuhliseni uqoqosho, ukuphumelela kwemfundo kunye nokuxhotyiswa kwezopolitiko. Ngokuqinisekileyo, abantu base-Afrika baseMerika baza kuba nendima ebalulekileyo yokudlala, nangona indlela yethu phambili iya kuqhubeka ibe nzima kwaye inzima.
• Njengoko siqhubeka phambili, masibuye sibuke emva. Ngokude nje sikhumbula abo bafela ilungelo lethu lokuvota nalabo bafana noJohn H. Johnson abakhela umbuso apho kungekho mntu, siya kufikelela kwikamva kunye nobunye.
Okungakumbi NgoDorothy Height
Abasetyhini kunye noMbutho woLungelo loLuntu
Iqoqo le-Quote ehlanganiswe nguJone Johnson Lewis. Iphepha ngalinye lokucaphulwa kule khompyutha kunye nokuqokelela konke © Jone Johnson Lewis. Le ngqokelela engaqhelekanga ihlanganiswe kwiminyaka emininzi. Ndizisola ngokuba andinako ukubonelela umthombo wendalo xa ungaboniswa kwinqanaba.
Ulwazi lo catshulwa:
UJone Johnson Lewis. "IiComplete zeDorothy." Malunga neMbali yabafazi. URL: http://womenshistory.about.com/od/quotes/a/dorothy_height.htm.
Biography kaCharles Martel
UJulia Ward Howe Biography
Ukuthetha ngokuSebenzayo kwi-Intanethi kubafundi baseNgesi
IsiJamani sabaTyelelo: I-Basic Basic Phrasebookbook
Indlela Yokunyamekela I-Skateboard Entsha
I-Oregon Institute of Technology Admissions
Isabelo se-Biography: Iimpawu zoMfundi kunye neRubriki yokuBhala
Iintlobo ezi-3 eziphezulu ze-Shark Attack
Imifanekiso yePterosaur kunye neeprofayili
Ngaba AmaKristu Kufanele Ahlulwe eNkundleni?
Siseko sikaSolon kunye nokuphakama kwentando yeninzi
Ibali "Emva kwehlabathi likaKristu"